Misy vehivavy miantso ahy foana, milaza fa miaraka amin'ny vadiko.
Tsy eken'ny fianakaviana ny fiarahanay roa. Inona no hatao?
Olana mety ho sedrain'ny tanora roa mifankatia ny hoe : tsy eken'ny fianakaviana ny fiarahan'izy ireo. Mety ho antony samihafa no mahatonga ny fianakaviana handrara io fiarahana io. Indrindray mety ho noho ny fihaviana.
Tsy mifankahazo ny anadahiko sy ny vadiko, nefa izaho sy ny anadahiko mpiray ombon’antoka amin’ny fitadiavam-bola.
Mba tsy hisian’ny olana, izay hitranga raha mbola mifanerasera ry zareo, dia na afoiko ny asa iarahako amin’ny anadahiko dia mijanona amin’ny vadiko aho, na tazoniko ny asako ary misara-bady aho. Inona no ataoko ?
Misy vehivavy miaraka amiko, tena tiako izy ary fantatro koa izy fa tia ahy.
Rehefa mangataka firaisana ara-nofo aminy anefa aho dia tsy mety izy, fa mbola tsy mahazo, hono. Dia inona izany no ataoko ?
Lehilahy saro-piaro, tsy mamela ny vadiny hikarakara vatana… inona no atao?
Anatin’ny tenin’ny soratra masina dia misy hoe : « ny vehivavy dia tsy manam-pahefana amin’ny tenany ».
Manambady aman-janaka aho nefa miaraka amin’olona manambady aman-janaka ihany koa.
Fantatry ny vadiny ny fiarahanay, ka te hisaraka aho. Izy anefa tsy mety fa milaza ho mbola tia ahy.
Tokony tsy hiasa ve ny vehivavy hisorohana ny hasarotam-piaron’ny vadiny?
Raha jerena ny baiboly dia ny vehivavy miasa no tena hita ao. Taty aoriana kosa dia hoe : anjaran’ny lehilahy no miasa fa ny vehivavy kosa natao hikarakara tokantrano.
27 taona nivadiana izaho sy ny vadiko.
Nohitsakitsahiny foana aho tao anatin’ny 17 taona. Niteraka roa tamin’io vehivavy io mihitsy izy, nefa tsy misaraka amiko.
Izy indray no mivazavaza ahy sady mandrahona fa tsy maintsy hisarahan'ny vadiko, hono aho, ary hivady ry zareo. Rehefa anontaniako ny vadiko dia milaza fa tsy mahafantatra io vehivavy io akory. Toroy hevitra aho.
Vehivavy 23 taona aho, miaraka amin’ny lehilahy 34 taona, izay vadin’olona. Tena tia ahy izy, izaho koa tia azy. Tsy miteraka ny vadiny, ka mety ve raha izahay no miteraka?
Na mifankatia aza ianareo, na tsy mifampiteraka aza izy roa, dia ity no tsy azo adinoina mihitsy : tsy ianao no vadiny. Noho izany, raha manapa-kevitra ny hiteraka ianareo dia tsy tafiditra ao anatin’ny ara-dalàna izany. Azony zanahana ilay zaza, saingy zaza azo ivelan’ny tokantrano foana.Anjaranao koa no mandinika, raha zakanao ny hitaiza irery ny zazakely, satria tsy afaka ny hahazo antoka mihitsy ianao fa ho eo foana io lehilahy io, hanampy anao amin’ny lafiny rehetra, amin’ny fitaizana sy famelomana an’ilay ho zanakareo. Ary tadidio ihany koa fa manova ny fifandraisan’olon-droa ny fisian’ny zanaka. Mety hampifanakaiky am-po anareo kokoa izany, nefa mety hampifanalavitra ihany koa. Rehefa misy zaza mantsy dia efa misy koa izay ny adidy, fa tsy ny mahafinaritra fotsiny toy ny taloha akory no hiarahana.
Niaraka tamin’ny vehivavy hafa ny vadiko taloha ary nifampiteraka ry zareo, fa tsy vita na inona na inona. Tsy nahafantatra aho tamin’ny voalohany, fa taty aoriana, korontanin’io vehivavy io foana ny fiainanay. Ilay vadiko koa manatanteraka ny sitrapon’izy sy ilay zanaky ry zareo foana. Izahay anefa efa vita soratra ary efa niteraka iray koa. Diso ve aho raha mandrara azy tsy hifanerasera amin’io vehivavy io intsony, izay efa nandrahona anay mianaka ho faty ? Mety mbola miaraka ve ry zareo ?
Ny mandrara ny vadinao tsy hifanerasera amin’io vehivavy io dia mety ho azonao atao ihany, fa ny mandrara azy tsy hifanerasera amin-janany kosa dia tsy azonao atao mihitsy. Adidiny io, ka na tsy miaraka intsony aza izy sy ilay reniny, dia manana andraikitra amin’ny famelomana an’ilay zaza foana ny vadinao. Raha mahita fomba ianareo ny hifaneraseran’ilay vadinao amin-janany, tsy atrehin’ilay vehivavy, dia izay no idealy indrindra, sady ianao rahateo miahiahy hoe : sao mbola miaraka ry zareo. Ny momba ilay fanakorontanana sy ilay fandrahonana, dia azonao atao tsara ny mametraka fitoriana fiandry (plainte de réserve) any amin’ny polisy. Mety tsy ho azo hisamborana azy aloha izany, saingy fara-faharatsiny, ho fantatr’ilay vehivavy fa tsy mandehandeha ho azy ny fandrahonana olona.